CTUM explained the labour issues to Irrawaddy Media – CTUM
CTUM explained the labour issues to Irrawaddy Media
Global Supply Chain Organizing and Future of Work
Published by ctum at October 19, 2019
CTUM explained the labour issues to Irrawaddy Media.(2019 Oct 19 in Park Royal Hotel , Yangon)
ဧရာ၀တီသတင်းဌာနမှ ဖိတ်ကြားမူဖြင့် CTUM မှ တာ၀န်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမူ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးမျိူးမင်းဦး ဧရာ၀တီ Senior Editorက ဦးဆောင်ပြီး မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ CTUM ဥက္ကဌဦးမောင်‌မောင်မှ အလုပ်သမား သမဂ္ဂအတွင်း ပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမူများ၊ အလုပ်သမားဥ‌ပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ အခြေအနေများ၊CTUM အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းလွင်မှ ILO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံနူန်းများ၊ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပညာပေး‌‌ေရးအကြောင်းအရာများကို ဒေါ်ထွေးထွေးသိန်း၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနတာ၀န်ခံမှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမူဖူလုံရေးဆိုင်ရာများ အကြောင်းအရာများကို CTUMလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒာစိုးမှ ဆက်လက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး CTUM ဘဏ္ဍရေးမှူး၊ IWFM ဥက္ကဌ ဒေါ်ခိုင်ဇာအောင်မှ အငြင်းပွားမူဖြေရှင်းရေးနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထိုနောက် Gender, အငြင်းပွားမူဖြေရှင်း‌ရေးယန္တရားဆိုင်ရာများကို CTUM အမျိူးသမီးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်ဆွေဆွေခိုင်၊ ခုံကောင်စီ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ‌ဦးအောင်ကျော်၊ လိူင်သာယာမြို့နယ် ညှိနိူင်းဖျန်ဖြေရေး အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ကြည်ထွန်းက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးမူခေါင်းစဉ်အလိုက် အမေးအဖြေကဏ္ဍလည်း ပါ၀င်သည်။ ဧရာ၀တီ သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်များ၊ အယ်ဒီတာများ အယောက် ၂၀ဦးခန့်နှင့် CTUM တာ၀န်ရှိသူ (၁၀)ဦး တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
CTUM explained the labour issues to Irrawaddy Media.
ဧရာ၀တီသတင်းဌာနမှ ဖိတ်ကြားမူဖြင့် CTUM မှ တာ၀န်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမူ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးမျိူးမင်းဦး ဧရာ၀တီ Senior Editorက ဦးဆောင်ပြီး မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ CTUM ဥက္ကဌဦးမောင်‌မောင်မှ အလုပ်သမား သမဂ္ဂအတွင်း ပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမူများ၊ အလုပ်သမားဥ‌ပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ အခြေအနေများ၊CTUM အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းလွင်မှ ILO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံနူန်းများ၊ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပညာပေးရအကြောင်းအရာများကို ဒေါ်ထွေးထွေးသိန်း၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဌာနတာ၀န်ခံမှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမူဖူလုံရေးဆိုင်ရာများ အကြောင်းအရာများကို CTUMလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒာစိုးမှ ဆက်လက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး CTUM ဘဏ္ဍရေးမှူး၊ IWFM ဥက္ကဌ ဒေါ်ခိုင်ဇာအောင်မှ အလုပ်သအားအငြင်းပွားမူဖြေရှင်းရေးနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fftub.burma%2Fposts%2F1210716459139454&width=500″ width=”500″ height=”805″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>